30% pere mpe nnụnụ na-akwaga mba ọzọ rutere Spain n'ihi mgbanwe ihu igwe | Netwọk Mgbasa Ozi
30% pere mpe nnụnụ na-akwaga mba ọzọ rutere Spain n'ihi mgbanwe ihu igwe
Kwa afọ enwere usoro ụmụ anụmanụ na-aga ebe ndị ọzọ dabara adaba maka ha, ebe ha nwere ike zụọ onwe ha n'ụzọ kachasị mma ma n'oge ọkọchị ma ọ bụ n'oge oyi. Otú ọ dị, Dika okpomoku zuru ụwa ọnụ na-abawanye, usoro nkwaghari ha na agbanweYabụ na enwere ụfọdụ ụdị na-akwụsị ịkwaga mba ọzọ. Otu n'ime ha bụ nnụnụ na-akwaga ebe ọzọ, dị ka ahịhịa amị ma ọ bụ nkịta ọhịa ndị na-abata na Spain n'oge mgbụsị akwụkwọ.
N'ihi gịnị? Isi ihe kpatara ya bụ mgbanwe ihu igwe. Ma obu na, site n'inwe ihe nile ha choro na ebe obibi ha, nke nta nke nta ha akwusi ifufu ike ha biri.
Ngụgụ ikpeazụ nke ụdị mmiri na-akwaga mba ọzọ, ya bụ, ndị biri na mmiri mmiri, nke emere na 2016, gosipụtara ngụkọta 73.689dị 53 nke umu XNUMX na-anọ n'oge oyi naanị na Castilla y León. Ha nwere ike iyi ka ọ dị ọtụtụ, mana site na Mịnịstrị mmepe na gburugburu ebe obibi ha kwusiri ike na ọ bụ nsonazụ pere mpe ebe ọ bụ na ha mere nyocha ahụ.
Na mba ndị ọzọ, ọnọdụ adịghị mma karịa: ọ bụrụ na nkezi nke otu narị puku na iri puku bịarutere n’etiti 110.000 na 2006, ugbu a gburugburu 75.000 abata kemgbe 2013.
Ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na ọpụpụ na-akpali site na e nwere nri, na mgbakwunye na ịdị adị nke oge oyi, ụmụ anụmanụ na-aga mba ọzọ na-efunahụ mkpa ọ dị ngwa ịga ebe ndị ọzọ n'ihi mgbanwe ihu igwe. Kemgbe afọ iri isii ndị ahụ Otu Spanish Society of Ornithology (SEO) nọ na-ahụ etu ụfọdụ ụdị si gbanwee ma ọ bụ na-agbanwe usoro njem ha na ebumnuche nke ịnwe nri mgbe oge ozuzu ga-agwụ.
Ya mere, ka afọ na-aga, ọ dị nwute na ọ ga-esiwanye ike ịhụ nnụnụ ndị ahụ mara mma dịka ngaji, ọbọgwụ uhie ma ọ bụ ọgazị na-acha ọcha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » 30% pere mpe nnụnụ na-akwaga mba ọzọ rutere Spain n'ihi mgbanwe ihu igwe
Ọcha ọcha dijo
Ọ bụrụ na nnụnụ 74000 bịarutere Castilla y León na Spain niile ọnụego ahụ dị 75000, ihe anaghị adabara m ...
Anaghị m ahụ mmekọrịta na mgbanwe ihu igwe ebe ọ bụ na egosighi data banyere ya. Ọ dị m ka nghọta dị mfe banyere onye edemede.
Efu ederede naanị na-achọ isi akụkọ dị mfe (ma na-ezighi ezi). Nnụnụ ndị ahụ ezuola inye ihe ọmụma na-adịghị mma.
Zaghachi White Stork
Ọdachi ndị kachasị njọ nke 2016